Somaliland oo soo bandhigtay ciidan ka soo goostay Puntland + COD | Wardoon
Home Somali News Somaliland oo soo bandhigtay ciidan ka soo goostay Puntland + COD
Somaliland oo soo bandhigtay ciidan ka soo goostay Puntland + COD
Maamulka Somaliland ayaa gobolka Sanaag ku soo bandhigay ciidamo iyo gaadiid dagaal oo ay sheegeen in ay ka soo goosteen Maamulka Puntland.
Ciidankan ka goostay Puntland ee ku biiray Somaliland ayaa horay uga goostay Maamulka Somaliland iyaga oo ku biiray sarkaal horay uga goostay maamulka Muuse Biixi oo ku sugan Magaalada Qardho.
Sarkaalka ciidanka horkacayay oo lagu magacaabo Jabriil Maxamed Ducaale ayaa warbaahinta kula hadlay gobolka Sanaag, waxa uuna sharaxaad ka bixiyay sababaha ay uga soo baxeen Puntland.
Waxa uuna sheegay in 40 askeri ay yihiin tirada ciidamada Puntland kasoo goosatay oo Somaliland isku soo dhiibay.
Taliyayaasha Ciidamada Booliska iyo Milatariga ee Maamulka Somaliland ee Gobolka Sanaag Cabdirisaaq Maxamed iyo Faysal Cali Boortaan ayaa sheegay in ay si weyn ugu faraxsan yihiin in ay markale kusoo laabtaan ciidankan.
Waxaana ay sidoo kale sheegeen in ay kaga mahadcelinayaan cid walba oo gacan ka geysatay in ay ciidamadaan ay ku noqdaan SomaliLand.
Maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa mudooyinki dambe ku dagaalamaayay degaano ka tirsan gobolka Sool, waxaana dagaaladaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac iyo shacabka degaanada lagu dagaalamay.
Previous articleYuusuf Garaad “Xoghayaha Guud wuxuu u yeelay dowladda Soomaaliya sida ay dalbatay, ma ahan inay dowladdu is mahdiso”
Next articleXisbiga UPD oo kudhawaaqay hogaamiyayaasha Xisbiga+ Sawirro
Augustine Mahiga oo geeriyooday
Yaa xilka ku wareejinaya Ra’iisul wasaaraha cusub ?